परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ?
परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ। उहाँले स्वर्ग, पृथ्वी र सबै जीवित प्राणीहरू सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरलाई कसैले सृष्टि गरेको होइन। उहाँको सुरुवात छैन। (भजन ९०:२) मानिसहरूले उहाँलाई खोजून्‌ र उहाँको विषयमा सत्य कुरा थाह पाऊन्‌ भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ।—प्रेषित १७:२४-२७ पढ्नुहोस्।
हामी परमेश्वरको नाम थाह पाउन सक्छौं। उहाँले बनाउनुभएका कुराहरूमा हामी उहाँका केही गुण देख्न सक्छौं। (रोमी १:२०) तर परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिन्ने हो भने हामीले उहाँको वचन बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। यसले हामीलाई मायालु परमेश्वरलाई अझ राम्ररी चिन्न मदत गर्छ।—भजन १०३:७-१० पढ्नुहोस्।
परमेश्वरलाई अन्याय कस्तो लाग्छ?
सृष्टिकर्ता यहोवा अन्यायलाई घृणा गर्नुहुन्छ। (व्यवस्था २५:१६) उहाँले मानिसहरूलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुभयो। त्यसैले त हामी अन्यायलाई घृणा गर्छौं। हाम्रो वरपर भइरहेको अन्यायमा परमेश्वरको कुनै हात छैन। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो इच्छाअनुसार रोज्ने अथवा निर्णय गर्ने क्षमता दिनुभएको छ। दुःखको कुरा, धेरै मानिसले आफ्नो यस क्षमताको दुरुपयोग गर्छन्‌ र अन्यायी व्यवहार गर्छन्‌। यो देखेर यहोवा “मनमा साह्रै दु:खित” हुनुहुन्छ।—उत्पत्ति ६:५, ६; व्यवस्था ३२:४, ५ पढ्नुहोस्।
यहोवा इन्साफ प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले अन्याय सधैंभरि रहन दिनुहुने छैन। (भजन ३७:२८, २९) परमेश्वरले चाँडै सबै अन्याय हटाउनुहुनेछ भनेर बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएको छ।—२ पत्रुस ३:७-९, १३ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरले चाँडै अन्याय हटाउनुहुनेछ भनेर बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएको छ
आवरण लेख मृत्युको खील
आवरण लेख मृत्युसित मानिसजातिको लडन्त
आवरण लेख मृत्यु सबै कुराको अन्त होइन!
छिमेकीसित कुराकानी भगवान्‌ले किन दुःखकष्ट हटाउनुहुन्न?
बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ यहोवाले मलाई बिर्सनुभएको छैन
मैले जीवन कसरी बिताएको परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ?
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा जनवरी २०१४ | मृत्यु सबै कुराको अन्त हो?